मे 15, 2019 मे 15, 2019 साइन्स इन्फोटेक3Comments औषधि, डा. राम बहादुर बोहरा
औषधिले रोग निको बनाउन ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । औषधि सेवन गर्ने तरिका यदि सहि छैन भने पनि रोग निको नहुन सक्छ । ६,६ घण्टामा खान दिएको औषधि यदि दिनमा ३ पटक ८ घण्टाको फरकमा खाएको देखिन्छ । यसरी दिएको औषधिले काम नगरेको हुनसक्छ ।
औषधि सेवनकर्ताले औषधि खरिद गर्दा भनेको मात्रामा नै औषधि सेवन गर्ने र गराउने तरिका ठिकसंग नबुझी खान दिएमा यसले फाइदा होइन बेफाइदा बढी हुने गरेको पाइन्छ । फार्मेसीबाट औषधि खरिद गर्दा पुरा बुझेर मात्र औषधि खरिद गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।
औषधि बिरामीको उपचारमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । यदि औषधिको सेवनमा कुनै प्रकारको गल्ती भयो भने यसको सिधा असर बिरामीको स्वास्थ्यमा पर्न सक्छ । त्यसैले औषधि सेवनमा सजकता अपनाउनु अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि औषधि सेवनमा त्रुटि भइरहेको पाइन्छ ।
यदी तपाईँ कुनै अस्पताल जानुभयो र चिकित्सकले औषधि लेखे भने त्यो कुन औषधि हो ? औषधि प्रयोग गर्ने मिति कहिलेसम्म लेखिएको छ, त्यो औषधिले के कस्ता साईडइफेक्स गर्न सक्छ ? खानापछि खाने कि खाना अघि खाने ? कति दिनसम्म खाने र कति घण्टाको फरकमा खाने भन्ने लगायतबारे बुझ्न जरुरी हुन्छ ।
कुनै कारण बिना नै सेवन गरिरहेको औषधि बन्द गर्दा केही असर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा पनि जानकारी हुनुपर्छ । जस्तै: सुगर, प्रेसर लगायत रोगहरुको औषधि लामो समयसम्म खानुपर्ने हुन्छ । चिकित्सकको सल्लाह बिना यो औषधिको डोज घटाउने वा बढाउने गर्नुहुँदैन ।
← रोग र औषधि
जुत्तामा मोजा लगाउँदा खुट्टा गन्हाउँने हटाउने उपायहरु →
3 thoughts on “औषधि सेवन गर्दा बुझ्नुपर्ने कुरा”
Pingback: औषधि सेवनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
Pingback: एलर्जीका प्रमुख कारणहरु
Pingback: होशियार ! ग्याष्ट्रिकको औषधि र्‍यानिटिडिनले हुनसक्छ क्यान्सर